November 2018 - Ceelhuur Online
November 30, 2018 News Editor238
Waxaa Maanta Heshiis Horu Dhac Ah Laga Gaaray Xiisadii Sabatay Dhimashada 4.ruux Oo 11.kii Bisgan Ka Dhacday Deegaanka TURBi Ee Duleedka Degmada Balan-bale. Hehiiskaan Oo Ay Si Wada Jir Ah Uga Shaqeeyeen Gudiga Xasilinta, Saraakiisha Ciidamada Qalabka sida Ee Qaybta 21.aad Iyo Talisyada Ciidamada NISSA Iyo Galmudug, Ugaasyada, Odaayaasha Dhaqanka Labada Dhinac, Cullumaa;udiin Iyo Bulshada […]
November 30, 2018 News Editor349
Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Baydhabo, ayaa sheegaya in dagaalamayaal katirsan Shabaab ay weerar saf balaaran ah ku qaadeen deegaanka Goof Guduud, Deegaanka la weeraray waxey 26-Km dhanka Glabeed uga toosantahay Baydhabo. Weerarka Shabaab oo ku bilowday gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa, ayaa dhacay Saaka, waxaana jira khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac […]
November 29, 2018 admin206
Wasiirka Warfaafinta Dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Heeloos oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Cadaado ayaa ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray Aqalka Sare ee ahaa in aqalka sare ku guuleystay dhameynta khilaafka Dowladda Dhexe iyo Dowlad goboleedyada. Wasiir Heeloos ayaa sheegay in wax khilaaf ah uusan u dhaxeyn Dowladda Federaalka iyo Dowlad goboleedka Galmudug, sidoo […]
November 29, 2018 News Editor268
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka Jaamacadda Carabta u fadhiya Soomaaliya. Ugu horeeyn Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Maxamed Abuukar Zubeyr ayaa ka warbixiyay hawshii soo qabsoontay ee la […]
November 29, 2018 News Editor235
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha ee caadiga ahaa. Ugu horayn gudiga maaraynta arimaha dhulka oo uu madax ka yahay Madaxweyne ku xigeenka koobad ayaa ka warbixiyay halka ay howshoodu marayso iyagoo sheegay in muwaadiniin badan ay isku diiwaan galinayaan sharciyaynta dhulka isagoo sharaxay caqabadaha ilaa hada […]
November 29, 2018 News Editor364
Ururka ONLF ayaa shaaciyay in hoggaana ugu sarreeya ay dib ugu laabanayaan Dalka Itoobiya Sabtiga soo socda ee ay Taariikhdu ku beegan tahay 1da Bisha December. Wabaahinta Dowladda Itoobiya ee FANA ayaa qortay in wafdiga ka socda ONLF ee ku laabanaya Itoobiya ay tiradoodu gaareyso 20 xubnood. FANA waxaa ay sheegtay in xubnahaasi uu ka […]
November 29, 2018 News Editor207
Taliyayaasha Ciidamada AMISOM ayaa lagu wadaa in ay maalinta berri ah kulan ku yeeshaan Magaalada Muqdisho ugana hadlaan qorshaha ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya. Lixda Taliye Ciidan ee AMISOM oo kala ah, Ugadna, Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo Burundi ayaa berri ku kulmaya Magaalada Muqdisho waxaana ay dejinayaan wajiga ugu dambeeya ee qorshaha AMISOM kaga baxeyso […]
Guddoonka Golaha Shacabka Oo Kala Diray Guddiga Maaliyadda BFS
November 28, 2018 News Editor194
Guddoonka Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa kala diray Guddiga Maaliyadda,Miisaaniyadda, isla Xisaabtanka iyo Qorsheynta. Wareegto ka soo baxday Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka C/Wali Sheekh Ibraahim Muudey, ayaa lagu sheegay in isaga oo ka duulaya qoraal uu soo qoray kuxigeenka 2aad ee Golaha shacabka uu kala diray Guddiga Maaliyadda. Guddigan ayaa Sabtigii la soo […]
November 28, 2018 admin253
Waxaa maanta xarigga laga jaray waddo jay ah oo lagu dhisay hab iskutashi ah xaafadda Waaberi Magaalada Cadaado, wadadan ayaa waxaa dhismaheeda iska kaashaday: 1- Shirkadda Dhismaha XIMAN oo uu leeyahay ganacsade Cilmi Nure 2. Xildhibaan Xuseen Ibraahim Xamarow. 3. Gudoomiye ku xigeenka Degmada Cadaado Nuur Yarow Xeyle. 4. iyo Bulshada Xaafadda Dagan. https://youtu.be/yyCH0R6MV6I
November 28, 2018 admin301
Xalay fiidkii ayaa diyaarado dagaal waxa ay duqeeyeen deegaanka Goodirley oo u dhaxeeyo Caad iyo Miiroon koofurta gobolka Mudug. Duqeyntaan ayaa la sheegayaa in lala beegsaday saraakiil sare oo ka tirsan Alshabaab. Saraakiishan ayaa shalay kormeeray saldhigii Maamiye oo diyaaradaha dagaalka Maraykanku todobaadkii hore dhowr jeer duqeeyeen, saldhigaan ayaa la aaminsan yahay inay alshabaab u […]